Bekuyinhlokomo yodwa kugcotshwa ikhansela | News24
Bekuyinhlokomo yodwa kugcotshwa ikhansela
Durban - Ligcine ligcotshwe ngokusemthehweni ikhansela leNkatha Freedom Party (IFP) eNdumeni kuWard 3 enyakatho yentshonalanga yeKwaZulu-Natal, njengoba kwaba nokhetho lokuchibiyela ngesonto eledlule lapho okwathatha khona uThabani Mlotshwa.
Kube yinhlokomo yodwa bekhuza izingoma ezitinyela umengameli weqembu elibusayo ngaphandle kwamahhovisi kaMasipala waseNdumeni.
Kuke kwaba khona isiphithiphithi phambilini lapho uThembinkosi Zulu owayeyikhansela lakule ndawo akhonjwa khona indlela, lapho kwakunezinsolo zokuthi wavota nenhlangano ebusayo, i-ANC, okhethweni lomasipala.
OLUNYE UDABA:Kudutshulwe kwabulawa ikhansela laseMkhambathini
UNokubonga Ndlovu oyilunga lomphakathi, uthi ulinde lukhulu kuleli khansela njengoba befune amanzi ahlanzekile, amathoyilethi nokulungiswa kwezindlu zomxhaso. Waphinde wanezezela ngokuthi abayilindele inkohlakalo kuye nokuthi kumele azilethe ngokushesha izidingo zomphakathi.
UZulu uphinde wazwakalisa ukuthi uhamba ezinyathelweni zomhloli wale nhlangano uDkt Mangosuthu Buthelezi, wathi lo mholi uyizonda kabi inkohlakalo nabantu abangogombelakwesabo.
Kulo mcimbi bekukhona neMeya yakule ndawo, uSboniso Mbatha, kanye noSomlomo uBongiwe Mbatha kanjalo namakhansela akule ndawo.